काठमाडौं, २२ असार । लामो समयदेखि दुई पक्षबीचको टक्करले प्रभावित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज पुनः सारिएको छ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बताइएको छ ।
पटकपटक बैठक अवरुद्ध गर्दै अध्यक्षद्वय केही प्राविधिक कुराहरुमा सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । दुई अध्यक्षबीच हुने कानेखुशीले समस्या समाधान गर्ने भएपछि बैठकको औपचारिकता किन भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बैठक स्थगित गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत हुनुका पछाडिका अध्यक्षद्वय केही सहमतिका लागि सहमत छन् भन्ने नै हो । यद्यपि, माधव नेपाल लगायतका नेताहरु भने कोठाभित्र गोप्य सहमति भन्दा पार्टीको आधिकारिक निकाय बैठकबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको खट्पटलाई तत्काल युद्धविराम गरेर अगाडि जाने सुत्र फेला परेको नेकपा नेताहरुको भनाई छ ।
उता चिनियाँ राजदूतले आइतबार राति माधव कुमार नेपाललाई भेटगरेपछि नेपाल पनि बैठक स्थगित गर्न सहमत भएको खुलमटार स्रोतको दावी छ ।
नेकपा विवाद बढ्दै गएकोमा छिमेकी चीन र भारत दुवैले चासो राख्न थालेपछि आकस्मिक रुपमा पार्टीभित्र युद्धविराम गर्नुपरेको उक्त स्रोत बताउँछ ।
खासगरी ९ सदस्यीय सचिवालयमा आफु समेत जम्मा ३ जना हुँदा र स्थायी कमिटीमा १५ जना भन्दा कम हुँदा पनि एक ईन्च पछि हट्न नखोज्ने ओलीमा यति ठुलो ताकत कहाँबाट आयो ?
यो प्रश्न एकातिर छ भने सचिवालय र स्थायी कमीटीमा दुई तिहाई हुँदा पनि ओलीमाथि कुनै कदम चाल्न नसक्नेगरी प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कसले रोकेको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
नेकपाका एक नेताले यी दुवै कुराले पार्टीको ताला चाबी ओली वा प्रचण्डसँग मात्रै नभएको आशंका उब्जिएको बताए । ‘पार्टी भित्र के भैरहेको छ भन्नेमा हामी नै अचम्मित छौं,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘अब विवाद धेरै तन्कायो भने अदृश्य शक्तिको खेलमा हामी फस्ने देखियो, यसबाट नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।’
तत्काल दुई अध्यक्ष बसेर एक अर्काप्रति लगाईएका सबै आरोप खारेज गर्ने, पार्टी एकताको बेला भएका सहमतिअनुसार अघि बढ्ने र पार्टी एक ढिक्का राख्ने, तत्काल प्रधानमन्त्रीले दुवै पद नछाड्ने तर पार्टीको कार्यकारी भूमिका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने, केहि समयपछि प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिने र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने आगामी महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्षमा दाबी नगर्ने उधारो सहमति हुनेगरी दोस्रो तहका नेताहरुले सहमतिको ड्राफ्ट तयार बनाइरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
मुलुकको प्रमुख तथा सत्तारुढ दलका गतिविधिहरु कोठाभित्र सीमित हुन थालेपछि अनेक आशंका र हल्लाहरु बाहिरिनु अस्वभाविक होइन ।
पार्टी महाधिवेशन र २ बर्षपछिको संसदीय चुनावको तयारीमा आजैदेखि जुट्ने, निर्वाचनपछि वामदेब गौतम प्रधानमन्त्री र झलनाथ खनाल राष्ट्रपति हुने सम्मको उधारो सहमतिमा नेताहरु पुगेको देखिन्छ । यी बाहेक तत्काल प्रदेश ५ र प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री हेरफेर हुनसक्ने सम्मको तयारी रहेको नेकपा स्रोतको दावी छ ।
अकस्मात आएको यो उधारो मोडल चिनियाँ मोडल भएको टिप्पणी समेत केहि नेताले गरेका छन् । तर, दुई अध्यक्षसँगै नेपाल, खनाल र गौतमले पनि एकपटक ओलीसँग कुरा गर्न चाहेका छन् ।